विवेकशील साझामा सुरु भयो भद्रगोल, पार्टी छाड्ने बढ्दै – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, १३ पुस, विवेकशील साझा पार्टीमा आन्तिरिक विवाद बढेपछि भद्रगोल देखिएको छ । पार्टी नेतृत्वबाट असन्तुष्ट अधिवक्ता ओम अर्यालले राजीनामा दिए । नेताहरु डा. सरोज धिताल, डा. दिनेश प्रसाई, रेशु अर्यालले पनि यसअघि नै पार्टी छोडिसकेका छन् ।
अहिलेकै शैलीमा पार्टीमा रहेर वैकल्पिक राजनीति गर्न नसक्ने उनीहरुको ठहर छ । पार्टी संयोजक रवीन्द्र मिश्र, सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाललगायतले एकलौटी ढंगले पार्टी चलाएको र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भूमिका नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।
पार्टीका अर्का संयोजक उज्वल थापा पनि आन्तरिक विवादकै विषयमा जिल्लाका नेता, कार्याकर्ताहरुसँग छलफल गरेर हालै काठमाडौँ फर्केका छन् । उनी पनि चाँडै ठोस निर्णय लिने तयारीमा रहेको आजको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
नेतृ तथा स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले पनि नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै असन्तुष्टि पोखेकी हुन् ।
Tagged पार्टी छाड्ने बढ्दै विवेकशील साझामा सुरु भयो भद्रगोल
भारतीय रियालिटी शोमा जिताउन झापाली युवतीलाई सहयोग
Tags: पार्टी छाड्ने बढ्दै, विवेकशील साझामा सुरु भयो भद्रगोल